जब आफ्नै बहिनीका कारण दिदिको विवाह मण्डपमा एक आँधीबेहरी आयो !
गृहपृष्ठ » अनौठो संसार » जब आफ्नै बहिनीका कारण दिदिको विवाह मण्डपमा एक आँधीबेहरी आयो !
काठमाडौं । संसारका सबै देशमा विवाहलाई लिएर धेरै अचम्मका घटनाहरू बाहिर आउने गर्छन् र भाइरल पनि हुन्छन् ।
भर्खरै, बेलायतबाट यस्तै एक घटना बाहिर आयो, जहाँ विवाहको दिन दुलहीकी बहिनीका कारण सबै कुरा बद्लिन पुग्यो ।
बहिनीका कारण दिदीको हुन लागेको विहे पनि भाँडियो । यो सब कसरी भयो भन्ने कुरा अझ रोचक छ । यो सब तब भयो, जब दुलहाले आफ्नै सालीको एउटा सानो इच्छा पुरा गर्न सफल भएनन् । त्यसपछि उनले यदि आफूले भनेको कुरा भएन भने विवाह समारोहमा उपस्थित नहुने अडान राखेकी थिइन् ।
आफ्नो कुरा नमानेमा हुँदै गरेको विहे पनि सफल हुन नदिने उनको भनाई थियो । वास्तवमा, यो घटना बेलायतको एउटा सहरको हो । ‘मिरर’ को एक अनलाइन रिपोर्ट अनुसार, दुलही आफैले सामाजिक सञ्जाल रेडिटमा सम्पूर्ण घटनाबारे उल्लेख गरेकी हुन् ।
दुलहीले बताइन् कि उनकी बहिनी शाकाहारी खाना मन पराउँछिन् र विवाहको समयमा सबै भाँडा शाकाहारी हुनुपर्ने उनको माग रहेको थियो । आफूले भने अनुसार नभए ठीक हुँदैन धम्की पनि दिएर उनी गएकी थिइन् ।
दुलहीकी बहिनीको यो कुरा सुनेर सबैजना चकित भए, तर कसैले कल्पना पनि गरेनन् कि नतिजा कति डरलाग्दो हुनेछ । विवाहमा दुलहीकी बहिनीको माग अनुसार शाकाहारी खाना सम्भव बनाउन सकिएको थिएन । मानिसहरु धेरै भएको हुँदा त्यसरी अलग तरिकाले खाना बनाउन सम्भव नभएको उनीहरुको तर्क थियो ।
जब दुलहीकी बहिनीलाई थाहा भयो, शाकाहारी खानाको सट्टा मांसाहारी खाना पनि बिहेमा तयार पारिएको छ, उनी रिसाइन् । त्यसपछि उनले दुलाहको परिवारसंग आफ्नो सबै सम्बन्ध तोड्ने बताइन् ।
त्यति मात्र होइन्, उनी आफ्नै दिदीको विवाहमा पनि उपस्थित भइनन् । त्यस बाहेक, दुलहीको घरका मानिसहरु पनि केटी पक्षका मानिसहरुसँग सो कुरामा सहमत भएनन् ।
समाचार अनुसार दुलहीको बहिनीको यो मागपछि, विवाहमा एक आँधीबेहरी आएको थियो र त्यो केटीले आफ्नो सम्बन्ध तोड्नुपर्यो । रिपोर्टले यो उल्लेख गर्दैन कि सम्बन्ध अन्तमा समाप्त भयो वा दुलहाले सालीको कारण बिहे गरेनन् ।
अर्कोतर्फ, सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले दुलहीकी बहिनीको आलोचना गर्दै त्यस्तो व्यवहार गरेकोप्रति रिस पोखेका छन् ।
अब कर्मचारीलाई हप्तामा तीन दिन छुट्टी
बख्तरबन्द गाडीबाट डलर खस्न थालेपछि नोट टिप्नेको भिडले सडक जाम
मदिराको तालमा बेहोस युवकले अस्पतालमा होस खुलेपछि दिएको बयानले डाक्टर नै झस्किए !
यी हुन् एकैपटक ६ केजी खाना खाने व्यक्ति, रेस्टुराँले उठाएको कदमबाट दुनियाँ चकित
३० वर्षीया जागिरे कन्यालाई इमान्दार वर चाहियो–सम्पर्क नम्बर ९८५५०५७
अष्ट्रेलियामा कार्यरत क्षेत्री नर्सलाई योग्य नेपाली बर चाहियो [सम्पर्क नम्बर सहित]
निकै कम समयावधिमै जन्म लिएर विश्व कीर्तिमान बनाउने शिशु
५० जना एयरहोस्टेसले बीच सडकमा आएर अचानक कपडा खोल्न थाले
घरभाडा तिर्न नसक्ने महिलासँग भाडाको बदलामा शारीरिक सम्पर्क माग्ने घरबेटी छ्याप्छ्याप्ती !
बिहे गरिसकेपछि थाहा भयो, श्रीमती त वयश्क फिल्मकी स्टार पो रहिछन्
पहिलो पटक सुँगुरको मृगौलालाई मानवका लागि जोडे, यसले झनै राम्रो काम गर्यो
अंडरगार्मेन्ट बेच्ने होस् वा मंगलसूत्र : सब्यसाचीको नयाँ ज्वेलरी विज्ञापनप्रति मानिसहरू आक्रोशित
नेपालमा नै भयो दुर्लभ घटना : २४ वर्षीया महिलाले जन्माइन् चम्ल्याहा बच्चा